သတင်း - J.bale Bio : inactivated နှင့် inactivated မဟုတ်သော VTM နှိုင်းယှဉ်
J.bale Bio : inactivated နှင့် inactivated မဟုတ်သော VTM နှိုင်းယှဉ်
VTM နှစ်ခု၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်- inactivated နှင့် non-activated
VTM (ဗိုင်းရပ်စ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမီဒီယာ) ကို စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သယ်ဆောင်ရာတွင် သုံးလေ့ရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများဖြစ်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်၊ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်များ၊ HFMD ဗိုင်းရပ်စ် စသည်တို့ကို စုဆောင်းရရှိထားသော ဗိုင်းရပ်စ်၏ တွေ့ရှိရသော အရာများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အရည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လည်ချောင်း၊ Nasal swabs သို့မဟုတ် အခြားသော သီးခြား အစိတ်အပိုင်းများမှ သိမ်းဆည်းထားသော နမူနာများကို နူကလိစ်အက်ဆစ် ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် သန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲထားပြီး တစ်မျိုးမှာ ပရိုတင်းနှင့် နျူကလိစ်အက်ဆစ်တို့ကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် မလှုပ်ရှားနိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အခြားတစ်မျိုးမှာ ပရိုတင်းဓာတ်ကို ရှင်းထုတ်ပြီး နူကလိစ်အက်ဆစ်ကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အသက်မဝင်စေသော lysis ဆားပါ၀င်သည့် မလှုပ်ရှားနိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
1. Inactivated virus ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြေရှင်းချက်-
Nucleic acid သည် deoxyribonucleic acid (DNA) နှင့် ribonucleic acid (RNA) အပါအဝင် nucleotides အများအပြားကို ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဇီဝဗေဒ macromolecular ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘဝ၏ အခြေခံအကျဆုံး အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တစ်ခုတည်းရှိပြီး nucleic acid နှင့် ပရိုတင်းတစ်မျိုးတည်းသာ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ nucleic acid ကိုတွေ့ရှိသောအခါဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ကပ်ပါးသက်ရှိများဖြစ်ပြီး နမူနာယူပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင် မရှင်သန်နိုင်ပါ။ အချိန်မီ မတွေ့ရှိနိုင်ပါက ၎င်းတို့ကို ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်တွင် ထည့်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရှာဖွေခြင်းပတ်ဝန်းကျင်၏ဘေးကင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသက်မဝင်စေရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော nucleic acid ကိုထုတ်လွှတ်ရန် lysis ဆားထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
Inactivated virus preservation solution သည် အဓိကအားဖြင့် nucleic acid extraction lysis solution မှ ပြုပြင်ထားသော virus lysis preservation solution ဖြစ်ပြီး lysis salt ၏ မြင့်မားသော အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော virus protein ကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ပိတ်နိုင်သည်၊ ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်သည်၊ အော်ပရေတာ Rnase enzyme inhibitor ပါ ၀ င်သောဒုတိယကူးစက်မှုသည်ဗိုင်းရပ်စ် nucleic acid ကိုပြိုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ပါရှိသော Tris၊ lysis ဆား၊ EDTA ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ nucleic acid ကိုရှင်းထုတ်ပြီး nucleic acid ကိုထုတ်လွှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် real-time fluorescent RT-PCR Nucleic acid testing ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ နမူနာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်-အသွင်အပြင်ရှိသော nucleic acid ပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းရှိမရှိ၊ အသက်မဝင်သော သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အား အခန်းအပူချိန်တွင် အချိန်အတော်ကြာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာ သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တို့ကို သက်သာစေပါသည်။
အသက်မဝင်သော ဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ကုန်များ၏ အင်္ဂါရပ်များ-
1. ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု၊ အရည်ပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ စနစ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဗိုင်းရပ်စ် lysate ပါ ၀ င်သည်၊ နမူနာယူပြီးနောက်ချက်ချင်းဗိုင်းရပ်စ်သည်အသက်မဝင်ပါ၊ ဆင့်ပွားကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စမ်းသပ်မှု ၀ န်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းမှုကိုသေချာစေသည်။
2. Viral DNA/RNA ကို ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အခန်းအပူချိန်တွင် ၁ ပတ်ကြာ သိမ်းဆည်း ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာအစုံအလင်ဖြင့် ထုတ်ယူပြီးနောက် ရရှိသော DNA/RNA သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီး အမျိုးမျိုးသော မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။ PCR၊ qPCR စသည်ဖြင့်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကကို ချွေတာရင်း၊
3. ဗိုင်းရပ်စ်နျူကလိစ်အက်ဆစ်ကို ပြိုပျက်မသွားအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး nucleic acid ထုတ်ယူခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို အလွန်တိုးတက်စေရန်အတွက် RNase inhibitors များပါရှိသည်။
4. ၎င်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ်၊ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်၊ လက်၊ ခြေထောက်နှင့် ပါးစပ်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့သော ဘုံဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများကို စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် လည်ချောင်းစုတ်တံများနှင့် နှာဆေးများ သို့မဟုတ် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ တစ်ရှူးနမူနာများကို စုဆောင်းနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသောနမူနာများကို နူကလိစ်အက်ဆစ်ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် သန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. အသက်မဝင်သော ဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြေရှင်းချက်-
အသက်မဝင်သောဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်တွင် lysis ဆားမပါဝင်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းထားသောဗိုင်းရပ်စ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောသမာဓိရှိပြီး ထောက်လှမ်းမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် ပို့ဆောင်မှုကြားခံအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြေရှင်းချက်အပေါ် အဓိကအခြေခံသည်။ နျူကလိကလစ်အက်ဆစ် စစ်ဆေးခြင်းအပြင် အခြားသုတေသနအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပရိုတင်းအင်္ကျီနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်နျူကလိစ်အက်ဆစ်၏ DNA သို့မဟုတ် RNA ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်သည် ပရိုတိန်း epitope နှင့် nucleic acid တို့ကို ဗီတိုအတွင်း သမာဓိရှိစေပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လည်ပတ်မှုအမှားအယွင်းများသောအခါတွင်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်အချို့ရှိသည်။ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများတွင် များသောအားဖြင့် Hanks အရည်အခြေခံ၊ gentamicin၊ မှိုသတ်ဆေးများ၊ BSA(V)၊ cryoprotectants၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကြားခံများနှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ စသည်တို့ပါဝင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းခွံကို အလွယ်တကူပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာ၏မူလအစကို အကြီးကျယ်ဆုံးအထိ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အတိုင်းအတာ။ နမူနာယူပြီးနောက် ရေရှည်သိုလှောင်မှုသည် တင်းကြပ်စွာနိမ့်သောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်သည်။
1. အေးခဲခြင်းမရှိသော အပူချိန်နိမ့်သော သိုလှောင်မှုသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ အပြင်ဘက်အခွံကို မထိခိုက်စေဘဲ ခရီးဝေး သွားလာရေး အတွက် အဆင်ပြေသည်။
2. ပါးစပ် swabs၊ nasal swabs၊ throat swab စသည်တို့အပါအဝင် swab နမူနာ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။
3. ၎င်းကို H1N1 influenza virus နှင့် swabs ဖြင့်နမူနာယူနိုင်သောအခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4. ဗိုင်းရပ်စ် nucleic acid ကို ကော်လံဗိုင်းရပ်စ် DNAout သို့မဟုတ် ကော်လံဗိုင်းရပ်စ် RNAout ဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သည်။
5. နမူနာဖျော်ရည်ရှိ ပဋိဇီဝဆေးများသည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုများ ညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်သည်။
6. နမူနာဖြေရှင်းချက်ကို ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ခွဲထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေသည့် ဘော့စ်သွေးရည်ကြည် အယ်လ်ဘမ်ဖြင့် ပေါင်းထည့်ထားသည်။
မလှုပ်ရှားနိုင်သော ဒီဇိုင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်း၏ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ပါဝင်မှုမှာ အသက်မဝင်သော အမျိုးအစားထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး ကုန်ကျစရိတ် အနည်းငယ် ပိုများကြောင်း နှစ်ခု၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှ ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုများလာတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ် နျူကလိစ်အက်ဆစ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်သလို တရားဝင် လည်ပတ်နေသရွေ့ အန္တရာယ်မရှိသလို စစ်ဆေးရေးမှူးမှ ဗိုင်းရပ်စ် သိုလှောင်မှု ဖြေရှင်းချက်ကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့ပါ။
အသက်မဝင်သောဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်တွင် စမ်းသပ်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ ရှိပြီး ၎င်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားသင့်ပြီး အသုံးချပရိုဂရမ်များ အများအပြားရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနမူနာပြွန်တွင် ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်အား ပေါင်းထည့်ထားပြီး ၎င်း၏ရောဂါပိုးကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို ငြင်းဆိုရုံဖြင့် အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အန္တရာယ်သည် နမူနာနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တည်ရှိနေသင့်သည်။
Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ, Viral Transport Media Kit, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Falcon Centrifuge Tubes 15ml,